नेपाल आज | कसरी थाहा पाउने डिहाइड्रेसन भएको?
कसरी थाहा पाउने डिहाइड्रेसन भएको?
काठमाडौं । नियमित पिएको पानीले थुप्रै रोगबाट बचाउँछ । त्यसैले हाम्रो शरीरका लागि पानी अत्यावश्यक छ । शरीरमा पानी बढी वा कमी हुन सक्छ । यी दुबै अबस्था स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ठीक होइन । यद्यपी, शरीरमा पानीको कमी भएमा अझ धेरै समस्या निम्तिन्छ । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा डिहाइड्रेसन भएको भनिन्छ ।
पानी अभावकै कारण आँखा सुन्निने, जलन हुनेलगायत समस्या देखापर्छ । शरीरमा पर्याप्त पानी नभएमा खाना राम्रोसँग नपच्ने समस्या हुन्छ । जसका कारण कब्जियत र एसिडिटीको समस्या निम्तिन्छ । पानीको अभावले शरीरको छाला फुश्रो हुने समस्या हुन्छ । यदि पिसाबको रङ पहेँलो, गाडा पहेँलो वा फिका भएमा पनि शरीरलाई पानी नपुगेको बुझ्नुपर्छ ।